Home Wararka Wararkii ugu danbeeyay dagaalka Ruushka & Ukraine
Wararkii ugu danbeeyay dagaalka Ruushka & Ukraine
Laba qarax oo waa weyn ayaa Jimcaha maanta ah laga maqlay bartamaha Kyiv, ayada oo ciidamada Ruushka ay riixayaan inay qabsadaan caasimadda dalka Ukraine.
Ciidamada Ukraine ayaa sheegay in Ruushka ay duqeeyeen goobo ay degan yihiin dad shacab ah, hase yeeshee habka difaaca hawada ay iska caabiyeen laba weerar oo culus, sida ay ku sheegeen qoraal ay soo dhigeen boggooda facebook.
Duqa magaalada Kyiv, Vitaly Klitschko ayaa sheegay in saddex qof ay dhaawacmeen ayada oo mid ka mid ah xaaladdiisa ay halis tahay kadib markii firirka gantaallo ay ku dhaceen dhisme ay shacab degan yihiin.
Waxa uu twitter-ka soo dhigay sawir muujinaya qeybo ka mid ah dhismaha oo fuqay iyo kooxaha dab damiska oo goobta jooga.
Gantaallada iyo hoobiyeyaasha Ruushka ayaa Khamiistii ku da’ay magaalooyin badan oo ka tirsan Ukraine kadib markii madaxweyne Vladimir Putin uu ku dhowaaqay dagaal uu ku qabsanayo dalkaas, oo ku qasbay shacab badan inay qaxaan.
Ciidamada Ruushka ayaa kusii siqaya gudaha Ukraine ayada oo dagaalka uu gaaray banaanka Kyiv, xilli ay dalalka Reer Galbeedka ay ku dhowaaqeen cunaqabateyno lagu ciqaabayo Moscow.
Khamiistii, ciidamada Ruushka ayaa la wareegay garoon diyaaradeedka ciidamada ee Gostomel ee duleedka waqooyiga galbeed ee Kyiv, kadb markii ay diyaarado kaga soo weerareen dhinaca xuduudda Belarus.
Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky ayaa Jimcaha maanta ah ka digay in kooxo luggooyo damacsan oo ku xiran Ruushka ay soo galeen Kyiv, wuxuuna ugu baaqay shacabka inay feejignaadaan.
Zelensky ayaa sheegay in 137 “geesiyaal” oo ay ku jiraan 10 sarkaal oo militari la dilay, halka 316 kale la dhaawacay. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira ilaalada Jasiiradda Zmiinyi ee gobolka Odesa oo ay qabsadeen Ruushka.
Waxa uu khudbad qiiro leh ku yiri “aayaha dalkeena wuxuu ku xiran yahay ciidankeena iyo dhammaan difaacayaasheena.”
Previous articleAl Shabaab oo qorsheyneysa in aay la wareegaan degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir
Next articleUkraine invasion news: Russia sends troops into Kyiv as explosions hit Kharkiv
Ciidamada Puntland oo howlgalo ka wada Gobolka Bari
RW Kheyre oo ka hor yimid magacaabidda Balal & Khilaaf ka...